Financial kambani "ALS Ushandise": kutenga wongororo uye mudonzvo
musika The Russian zvemari, sezvo imi kuti fembera pamusoro Exchange uye nhau misoro, chinoenda kuburikidza yayo yakanaka nguva. Zvikonzero zvacho zvakawanda sei vneshne- uye mudzimba zvinoita kuti tizive nzira yacho uye nzvimbo yaro munyika.
Zvisinei, pasinei akaipa kuitika munyika mabasa mari nhasi vari kushanda zviuru makambani. Vamwe vavo, sezvo indasitiri vatungamiri, kunyange kuwedzera mavhoriyamu dzavo, kuwedzera mumusika. Izvi zvinoratidza kuti zvakarurama nzira basa kungaita kuti munhu ade mugumisiro.
Saka, munyaya ino tichataura pamusoro rimwe nokururamisira inozivikanwa kufambidzana simba zvinzvimbo inivhesitimendi pamusika. Ndiyo "Ul mari". Reviews, takawana padandemutande zvingaite vamwe pfungwa panyaya iyi, tsvaka nzira chii anoshanda kambani, chii chacho anogadza pacharo uye sei zvinobudirira zvandakatonga navo. Uyezve, sezvo mashoko, hatina akashandisa pachena date - ruzivo kubva pamutemo uye mamwe nzvimbo, ichirondedzera mabasa musangano. Nesuwo kudzishandisa munyaya ino.
Ngatitange nevamwe vakawanda mashoko, anoratidza mabasa "Ushandise ALS." Reviews vanoti kuti unogona kuwana pamusoro pamutemo Website veboka. Saka, chikuru yezvinoreva kambani - ndiyo imwe pfuma.
Kurera mari, avo augmentation uye operative mipiro pamusoro Hurumende inoda mutoro yokusvika sangano läpinäkyvä kushanda ezvinhu, kushanda zvakanaka, mugumisiro dzidziso uye rakavimbika. misimboti zvose izvi, kana uchitenda kuti anonyora nezvake mari kambani "ALS mari" (wongororo, isuwo kupa zvishoma mberi, kuona sei ichi ichokwadi), zvinobudirira rinobatanidza mabasa ayo.
Sezvinotaurwa pamusoro bhendi wacho Website, vashandi chekambani - ndivo ruzivo vatengesi vari kushanda kuwedzera guru munyaya mabasa boka. Kutaura zvazviri, mumwe muzvinashawo ane zvokutengeserana nzira, nzira kuti aigona kuva zvikuru akasiyana chii nevamwe kuita. Zvisinei, mabasa avo ose vakabatanidzwa nechinangwa chimwe chete: kuti maximize yacho kwemari wekambani, uye pamwe chete nacho uye kuti makambani vanogamuchira.
Kunze vatengesi, sokutaurwa pamusoro nekambani Website, mumabasa ayo uye kushingaira kubatanidzwa nemamwe vanachiremba: vaongorori uye IT-mainjiniya mubasa kutsvaka zvinogadzirisa yakakodzera nokuda zvinetso kambani. Achiratidza mashoko zvose izvi, tinogona kugumisa kuti basa "Ul mari" (wongororo kupi tiri kufarira pakutanga), nechinangwa paakasika Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri zvokutengeserana nzira mu "Forex" uye zvavo kushandisa michina.
Pano, pamusoro bhendi wacho Website, unogona kuona mashoko sei kutanga basa ravo iri boka uye api nayo anotarisana iri kutanga kwekupwanyiwa. Kubva ichi zvinoreva kuti basa zvakatanga muna 2013, pashure mari nenyanzvi, vakabatanidzwa zvakafanana zvavanofarira, vakasarudza nokuparura basa rakadaro. In kwokutanga nzendo Vector wekambani zvakanzi akatumwa kumusika zviduku private vanoita anomiririrwa vagari vanhuwo vaigona pasina ruzivo mune mari atsvage vaya zviridzwa ayo anomupa pamusoro pavo. Zvikurukuru, tiri kutaura zvakakodzera mari kurapa makambani madiki.
Chokwadi, basa "Ul mari" (wongororo vanogona kupupurira ichi) hazvirevi kutanga kubva muvare, uye ane huru ruzivo pamusoro "Forex", vakanyorwa guta guru rubles mamiriyoni 30, inishuwarenzi pamusoro "Alfa Insurance" mamiriyoni 500. Mukuwedzera, kunyange pakutanga chaipo, kambani yakatanga yayo dillingovyh centre, iyo yakatangwa nokuedza vatengesi uye vaongorori vane zvakawanda ruzivo. Panguva kwayakaita wokupedzisira kamuti harisi chete chinonyanya Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri zvemari utariri nzira, asi akarwawo kune ziendamberi diversification mari wechiGeorgian. nzira Izvi zvinoita kuderedza ngozi apo maximizing mari ndakawana.
Sezvaitarisirwa, kambani mari "ALS mari", iro akaongororazve, tinopa zvishoma zvakare mundima, anokoka vose vanoda kuziviswa pamusoro chivimbiso chakasimba chekuchengetedzwa makambani ayo. Vari inoiswa papeji pamwe yakakodzera zita. Achitaura zvishoma, ndicho mazita zvinhu anoratidza kuda kuchengeteka. Saka, pano akaratidza diversification (kambani unoshanda nhatu dzakasiyana mirayiridzo, napo nokuparadzira nemigove mumabhizimisi dzavo); pamutemo zvigadziriswe (akaratidza kuti investor mari kungoitwa chibvumirano akapedzisa divi); ataurwa odhita uye inishuwarenzi, izvo vari nechinangwa kudzivirira zvido vanhu mari yavo. izvi zvose uye dzimwe pfungwa anoratidza kuti boka iri mubhizimisi rine chinhu chokupa kuti vatengi ayo.
News pamusoro kugadzirisa
Zvose zvinoratidzwa pamusoro - zviri Mashoko akanaka sei hwakavimbika uye njodzi Nyaya ino anotsanangura mamiriro kubatsirwa dzakawanda kuenda naye uye kubva rubatsiro pebenzi investor. Zvisinei, kana iwe kuenda pamusoro nekambani Website pamusoro, unogona anokwezvera yokuti dzimwe nzvimbo dzose hazvisi kuwanikwa, uye kushingaira mumwe, "News". Pano, zviri kumusoro peji, mashoko ari richengetwe kubva March 1, 2016 kuti kambani kuita kuti kugadzirisa mabasa ayo.
Kunyange pasina kuverenga anorondedzera "VLAN mari" vatengi ongororo, unogona kufungidzira kuti boka kwaanoda mabasa ayo. Chikonzero chacho chiri pachena: kambani havagoni kubhadhara zvikwereti zvayo kune makambani. Pano, panzvimbo, izvozvo akaratidza kuti kambani hunoguma kuti mari, inotanga makondirakiti uye paanounza muripo nzira nokuda kwokuripirwa inishuwarenzi guru.
By nyore chiito pamusoro kutsvaka injini takakwanisa kuwana ruzivo pamusoro chirongwa ichi mu rinobatanidza chechinyorwa. Saka, kana uri bhendi wacho Website rine chakanaka pamusoro nyanzvi kusvika wekambani nyaya (izvo isu yambotaurwa), panguva mubhizimisi forum uye pomunhu, kwokukurukurwa chacho, unogona kuwana maitiro akasiyana kwazvo chirongwa.
Kunyanya, zvakatsaurirwa "Ul mari" wongororo kuti makambani vanoti boka riri kuita kugamuchira deposits, ndingadaro, panheyo "HYIP" izvo kubhadhara kuti makambani dzinoitwa ne anotevera mipiro. Vamwe vanoshandisa dana ichi zvekuvaka "Pyramid", iro rinogona hazvivimbisi kudzoka mari zvose nhengo dzayo: chaiyo "pamwe" ndeavo vanoita nayo panguva imwe yapfuura rwakazara chete.
Network inivhesitimendi muzvirongwa
Chimwe dzinonakidza pfungwa - ndiro chinzvimbo chaiyo investprogramy uye magadzirirwo ayo, uyewo "branching" anoverengeka zvirongwa zvakadaro. Chekutanga, kambani yakatsaurirwa kuna "Ul kushandisa" wongororo vanoti chirongwa chaiko asina magwaro anotaurwa website yayo. Izvi zvinoreva kuti vanhu vari zvikuru kashoma kuti zvechokwadi aripire deposits zvavo kupfuura zvingaita sokuti pakutanga kuaona. Vose mhosva - akanaka magwaro sei zvakakomba ichi kambani uye kusawirirana ayo yavo chaiyo hweHIV.
Chechipiri, chirongwa vanyori chokwadi pane mumwe akafanana chirongwa, kushanda pasi yakasiyana zita. Kusiyiwa pamusoro "Ul mari" (Krasnodar) wongororo cherechedza kuti kushambadzira nayo akaisa pamusoro chete vezvenhau sezvo ruzivo kuti vamwe chirongwa inivhesitimendi. Izvi zvinoreva kuti chirongwa mamaneja akaswedera mari bhizimisi ravo zvikuru pragmatically.
Chete zvakare kudzidza kunenge kusiiwa vanoshandisa, anogona kuratidza mufananidzo zvizere. Zvakaratidza kuti kambani "ALS Ushandise" (inofambiswa zvizere yasimbiswa) hapana chimwe sezvo mumwe chirongwa nengozi, yakavakwa panheyo yacho chepiramidhi.
Basa rake raiva achishandisa "kuviga" ayo basa, runoratidzwa inonakidza ngano uye vakafunga-gore matatu basa ruzivo, kubva oupfumi dzavo dzakavanzika makambani. Mune remangwana, chikamu mari vaunganidza kuti kubhadhara kuna kwokutanga vanoita, uye vamwe, pachena, "Ipwa".
Munguva pfupi, kana kuti vanyori chirongwa akaona zvakakodzera, yakanga yakavharwa. Nzvimbo ine mashoko pamusoro "muripo" kubvira kambani yacho inishuwarenzi, asi chokwadi ichi ndechimwe ngano. No muripo akanyengerwa vanoita havaoni.
The mubhizimisi racho "Ul mari" (kutenga ongororo, nenzira, mune ichi tinovimbiswa), Ungangove, inongova imwe purogiramu vanhu vanomhanya dzimwe sarudzo zvakadaro uye kuti mari iri naivety nyore vanhu.
Feedback kubva nomudonzvo
Sezvo ungatarisira, pfungwa chaiwo vanhu kushanda kambani "ALS Ushandise" (inofambiswa kubva nomudonzvo, kutaura nyore), takawana zvakanga zvisingaiti. Sezvo iri rudzi "vanonyengedza", izvi hazvishamisi. Zvino chokwadi basa basa iri, isu zvaizova kashoma kunzwa maonero avo 10-20 vatengesi uye vaongorori (kunyange kana vakanga chaiwo).
Chaizvoizvo pane chimwe chete kudzokorora kusiiwa vaone akumbirwa mushandi (mumwe munhu). Zvakakurudzira zviito chekambani, uye tiri kutaura chokwadi chokuti mari chirongwa iri nyore atarisana zvimwe zvinetso. In komendari ichi chine refu "akanaka" mashoko akafanana hunhu kune avo kuti isu akapa dzako pamusoro. Zvisinei, hatigoni kutaura kuti izvi ndizvo kudzokorora chaiyo. "Ul mari" chinowanzoitika kunyora mashoko urwu kuti kusika chimiro kubudirira.
Saka, sezvaungaona, mukufamba achinyora nyaya iyi iri mari mabasa kambani, hatina vakaongorora dzinoverengeka zvinyorwa. Maererano mugumisiro processing rokutanga (yepamutemo Website kambani) tinogona kutaura kuti pano dzinoturwa vamwe "rungano", iro zvechokwadi zvakaoma kudavira. Kutaurwa vakabudirira "Forex" -strategy, pave marobhoti uye anonongedzera kuti vanotengesa refu-refu ruzivo revashandi, muri zvakawanda zvinhu inofadza kuverenga makambani.
A kunoda kuti tinyatsonzwisisa wekambani, takasangana pamusoro forum uye pomunhu, chiri kukurukurwa chirongwa ichi, akasiyana zvikuru. Zvinoratidza "Ul mari" (Nizhny Novgorod) Reviews vanoita chaidzo havasi kudaro unequivocal mu mutengo wake. Hongu, munhu anonyora kuti ivo zvechokwadi akabhadhara yechimbadzo dhipoziti. Zvichida izvi ndizvo rombo ndivo vakakwanisa kuva pakati vokutanga kuti upfumi uye kudzokera navo.
Zvisinei, vakawanda wongororo vachiri dzinobva kubiridzirwa makambani. All vanonyora kuti zvinoreva saka havana kudzokera, uye kuti kambani iri, chokwadi akaiswa pacharo nenzira yakasiyana chaizvo, akasiyana munyika chokwadi.
ino Kukosha ndiyo: kuti "Ul mari", uyewo mazana zvirongwa zvakafanana, aiva "HYIP" chete. Kufanana nevamwe zvirongwa izvi mhando, zvakanzi pahwaro "yakanaka" ngano, izvo zvinoita kuti kumutsa mari kubva private makambani. Mune ramangwana, ndokuguma saizvozvo sezvo muzvirongwa zvose zvakadaro - zvachose kurasikirwa mari uye wokugumisa depositors '. Most wakakomborerwa kune vaya vari pakutanga chirongwa mabasa, uye, chokwadi, nokuda creators.
Sei sarudza PAMM bhizimisi In Forex?
Iwe oupfumi dzaro STRUCTURAL zvinhu
Sei kuwana investor?
Vanoti chii pamusoro Gold Line maitiro wongororo?
Chii IPO uye zvakadini tinorasikirwa kuti issuer
"Rostelecom". Consumer wongororo uye hurumende
A mutiraipodhi nokuti kamera: kubva amateurs kuti kwakanakirei
Japanese Toilet: sei aiva uye chii chaiva
The nzira uye mitemo achizadza waybills
How kuderedza uremu pasina kudhayeta kuyaruka - Tips Kuvabereki
Kuzivikanwa Style kuvake: Olivia Palermo
Cafe "Am-Bar" (Balakovo) anokukoka kuti zororo
Nama Netambo - chii? nemhando nama tambo chii?
YemaARV zvinodhaka: mazita uye uchapupu. Zvikuru basa yemaARV kurapa
Yemasitadha-mavara mbatya - isingatarisirwi uye anoyevedza!
Balaklava - masiki uye chivharo "imwe bhodhoro"
LCD "Chizvarwa": wongororo, kero, ari yokuvaka, asi wava